Manohana akaiky ny kaominina ny ONG Madasun sy ny Cnaps - Madagascar Informations
Manohana akaiky ny kaominina ny ONG Madasun sy ny Cnaps
20 décembre 2016 Madagascar Informations Aucun commentaire
Natolotra tamin’ny fomba ofisialy androany ireo fitaovana hanatanterahina ny lalao baolina kitra hiadiana ny coupe de noel izay ho tanterahina any amin’ny kaomina Mahereza ny faha 24 ny volana Decembre ho avy izao.
Tonga nandray ireo fitaovana ireo ny ben’ny Tanana ny kaomina Mahereza. Fitaovana toy ny maillot sy baolina maromaro izany hoe fitaovana feno ahafahana milalao. Mpilalao miisa 11 isakin’ny ekipa no handray anjara amin’ity fifaninanana ity.
Marihina fa ny ONG Madasun sy ny Cnaps no tompon’antoka amin’ny fanohanana izao lalao izao mba ahafahana mampandroso ny tanora sy ny fanatanjahan-tena. Tsy hijanona hatreo ny fiaraha-miasa eo amin’ny kaomina Mahereza sy ny ONG Madasun sy ny Cnaps. Marihina ihany koa fa tsy kaomina vitsivitsy fotsiny ihany no hiarahany ONG Madasun sy ny Cnaps miasa fa misandrahaka manerana an’ny Madagasikara ary tsy hampidirana resaka politika fa ny lalany fampandrosoana no tanjona .
← Vision Madagascar: hanolotra hazonoely ny kaomina isan-taona
Le Rotary Club Antananarivo « Doyen » au chevet des membres du CESRN Faniry Ambohibao. →
Journée nationale de l’assainissement à IAVOLOHA
12 janvier 2018 Madagascar Informations 0